warkii.com » Akshey kumar oo mudo sadax maalin ah taageerayaashiisa umahadcelin, iyo fariinta uulawadaagay?!!
Akshey kumar oo mudo sadax maalin ah taageerayaashiisa umahadcelin, iyo fariinta uulawadaagay?!!
Akshay Kumar, oo haatan ku sugan London, ayaa qoyskiisa iyo kooxda ‘Bell Bottom’ dhawaan ula dabaal degay sanadguuradiisii ​​53aad. balse waxaa laguheestaa inuusan mudo sadax maalin ah umahadcelin taageerayaashiisa
Xaaskiisa Twinkle Khanna ayaa xitaa baraha bulshada kula wadaagtay muuqaal ka hadlaya dabaal daga dhalashadiisa. Khiladi Kumar ayaa muuqaal la wadaagay baraha bulshada wuxuuna ugu mahadceliyay taageerayaashiisa kalgacalka iyo taageerada ee umuujiyeen. Muuqaalka, Akshay wuxuu ka raali galiyay taageerayaashiisa inay kuqaadatay 3 maalmood inuu ku dhaho waad mahadsantihiin madaama uu duubis Scotland kawado filmkiisa ‘Bell Bottom’.
Wuxuu sidoo kale sheegay inuu waqti laqaatay qoyskiisa uuna jacayl badan ka helay taageerayaashiisa. Isagoo u mahadcelinaya taageerayaashiisa, Akshay wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay inuu u jiro iyaga dartood. Horay Twinkle ayaa u qaadatay barteeda Instagram-ka waxayna sawir la wadaagtay Akshay dhalashadiisa. Waxay xitaa la wadaagtay kaarka dhalashada gacanta oo ay sameysay gabadhooda Nitara.
Dhanka kale, Akshay iyo kooxda ‘Bell Bottom’ ayaa shaqadooda kawataan Scotland. Waa jilaagii ugu horeeyay ee dib u bilaaba duubista filimada. Kooxda ayaa qaadeysa dhammaan taxaddarrada lagama maarmaanka ah inta ay duubista wadaan